Iindaba - Zithini zonke iindlela zokuvavanya i-coronavirus?
Zithini zonke iindlela zokuvavanywa kwe-coronavirus?
Zimbini iintlobo zovavanyo xa kuziwa ukukhangela i-COVID-19: iimvavanyo zentsholongwane, ezijonga usulelo lwangoku, kunye novavanyo lwe-antibody, oluchaza ukuba amajoni akho omzimba akha impendulo kusulelo lwangaphambili.
Ke, ukwazi ukuba unayo na le ntsholongwane, nto leyo ethetha ukuba unokusasaza intsholongwane kuluntu lonke, okanye ukuba unokuzikhusela kwintsholongwane kubalulekile. Nantsi into ekufuneka uyazi malunga neendidi ezimbini zovavanyo lwe-COVID-19.
Yintoni ekufuneka uyazi malunga novavanyo lwentsholongwane
Uvavanyo lwentsholongwane, ekwabizwa ngokuba luvavanyo lweemolekyuli, zihlala ziqhutywa ngeempumlo okanye ngomqala swab yendlela ephezulu yokuphefumla. Iingcali zokhathalelo lwempilo ngoku kufuneka zithathe ii-nasal swabs, ngokwemiqathango ehlaziyiweyo ye-CDC yezikhokelo zeklinikhi. Nangona kunjalo, ii-swabs zomqala ziseloluhlobo lwesampuli eyamkelekileyo ukuba kukho imfuneko.
Iisampulu eziqokelelweyo ziyavavanywa ukukhangela iimpawu zayo nayiphi na into ebonakalayo ye-coronavirus.
Ukuza kuthi ga ngoku, zingama-25 ezintsonkothileyo iimvavanyo ezisekwe kwimolekyuli eziphuhliswe ziilebhu ezifumene isigunyaziso sokusetyenziswa okungxamisekileyo kwi-US Food and Drug Administration ukusukela ngoMeyi 12. Ngaphezulu kweenkampani ezili-110 ezingenisa izicelo zokugunyaziswa kwi-FDA, ngokwengxelo evela EGoodRx.
Yintoni omele uyazi ngovavanyo lwe-antibody?
Uvavanyo lwe-Antibody, ekwabizwa ngokuba luvavanyo lwe-serological, lufuna isampulu yegazi. Ngokungafaniyo novavanyo lwentsholongwane olujonga usulelo olusebenzayo, uvavanyo lwe-antibody kufuneka lwenziwe ubuncinci kwiveki enye emva kosulelo oluqinisekisiweyo lwe-coronavirus, okanye usulelo olukrokrelwayo kwizigulana ezinophawu olungenasifo kunye nobumnene, kuba amajoni omzimba athatha ixesha elide ukwenza ii-antibodies.
Nangona ii-antibodies zinceda ukulwa usulelo, abukho ubungqina obubonisa ukuba i-coronavirus immunity inokwenzeka na. Olunye uphando luqhutywa ziiarhente zempilo.
Kukho iilebhu ezili-11 ezifumene isigunyaziso sokusetyenziswa ngokungxamisekileyo kwi-FDA yokuvavanywa kwamachiza omzimba ukusukela ngoMeyi 12. Ngaphezulu kweenkampani ezingama-250 ezikhukhula kwimarike ngovavanyo lwe-antibody olungenakuba luchanekile ngokutsho kweGoodRx, kwaye abavelisi abangaphezulu kwe-170 balindile kwisigqibo sesigunyaziso esivela kwi-FDA.
Kuthekani ngovavanyo lwasekhaya?
Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Epreli, i-FDA igunyazise isampulu yokuqala yasekhaya yokuvavanywa kwesampulu yovavanyo evela kwiLebhu yeLebhu yaseMelika. Ikhithi yovavanyo lwentsholongwane, ehanjiswa yiPixel yiLabCorp, ifuna i-swab yempumlo kwaye kufuneka ithunyelwe ngeposi kwilebhu emiselweyo yokuvavanywa.
Ixesha Post: Jun-03-2021